FIFAMPITIFIRANA :: Dahalo maro lavon’ny zandary, omby telonjato tafaverina • AoRaha
FIFAMPITIFIRANA Dahalo maro lavon’ny zandary, omby telonjato tafaverina
Henjana ny fifandonana eo amin’ny dahalo sy ny zandary any ambani- vohitra. Dahalo am-polony maro no nanafika tany Antanamieva-Befandriana Atsimo, afak’omaly.
Niambina kizo avy hatrany ny zandary avy ao Toliara vao naheno ity tranga ity. Tonga nandalo teo amin’io kizon’i Beparasy io tokoa ireo dahalo, omaly tokony tamin’ny 2 ora sy sasany, ka raikitra ny fifampitifirana mahery vaika.
“Avy nangalatra omby teo amin’ny tanànan’i Beparasy ireo dahalo no nandalo teo amin’ilay kizo. Efa niandry fotsiny teo anefa ny zandary. Nasaina nijanona izy ireo saingy tsy nanaiky mora fa nitifitra avy hatrany. Voatery nitsoaka izy ireo fa tsy nahazaka ny fifampitifirana mahery vaika sy nahita ireo namany efa lavo ka tsy afa-nanampy azy ireo intsony”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria.
Taorian’io fifampitifirana mahery vaika io dia avotra sy tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo omby 300 nalain’ireo dahalo. Tsy fantatra kosa izay niafaran’ireo razana voatifitra. Misy ny milaza araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa nalain’ireo dahalo namany ihany ireo razana taorian’ny fifampitifirana.
Fantatra ihany koa fa betsaka tamin’ireo dahalo no naratra saingy mbola afa-nitsoaka ihany. Taorian’ity zava-nitranga ity dia niverina tany amin’ ny tanàna notafihin’ireo dahalo ireo zandary niambina sao mbola miverina indray ireo dahalo manafika. “Nanampy
betsaka tamin’ny nahazoana izao vokatra izao ny fanomezam-baovao avy amin’olon-tsotra na dia tsy nazava aza ny toerana voatondro nitsoahan’ireo dahalo. Maniry izahay mba hanao toy izany avokoa ny olona rehetra mba hamongorana ny asan-jiolahy fanetriben’
ny firenena”, hoy ny fanambaràna avy amin’ny zandarimaria.
ASA FITADIAVANA :: Tra-tehaka ny tovolahy iray mpanera taolam-paty